Kicheni marobhoti - ndeupi wandinofanira kusarudza, mamodheru uye zvakanakira? | Bezzia
Ndiwo mumwe wemibvunzo yatinogona kuzvibvunza isu zvakanyanya uye ndeyekuti kune akawanda uye akasiyana marobhoti ekicheni yatinayo pamusika. Saka, dzimwe nguva zvinotiomera kuti tisarudze imwe. Hatizive zvatinofanira kutarisa tisati tatanga mazviri, saka nhasi tichaenda kukubatsira.
Isu tinokupa iwe yakanakira kuraira uye zvakare nerese chairo ruzivo saka kuti sarudzo yako ndiyo inonyanya kukodzera pane zvaunoda. Nekuti hatisi tese tine zvakafanana, asi isu tinoda kutenga yakanaka uye inogara nekusingaperi. Nekudaro, iwe uri mune akanakisa maoko uye ikozvino tiri kuzokuratidza.
1 Ndeipi irobhoti rakanakisa rekubika
2 Ndeipi robhoti rekicheni rinotengesa zvakanyanya
3 Ndezvipi zvakanakira marobhoti ekicheni
Ndeipi irobhoti rakanakisa rekubika
Pasina kupokana pane akawanda marangi uye mazhinji mamodheru aunazvo pamusika. Asi yeavo vese, iwe unofanirwa kugara uchifunga nhevedzano yematanho usati wavatenga. Nekuti ichokwadi kuti iwo ane mabhenefiti makuru asi izvi zvinofanirwa kuchinjirwa kuhupenyu hwedu.
Iko kugona kwemashini edu ekicheni ndeimwe yeakakosha mapoinzi. Nekuti isu tichave tichiongorora izvi zvinoenderana nevanodya izvo zvatiri. Kana uchigara uchidya vanhu vana, hazvizove zvakafanana mumba zvinogara vaviri kana pamwe mumwe chete. Saka une maviri litre mamodheru pamwe ne5 litita.
Simba nderimwe remapoinzi akakosha. Nekuti iro simba rakawanda rakaenzana nesimba rakawanda uye kuti rinogara kwenguva refu uye nemhedzisiro iri nani. Mamwe ane 500W emagetsi, nepo mamwe anopfuura 1000W nekure.
Mabasa ainayo ndeimwe yemafungiro ekutarisa. Nekuti vamwe vane anosvika gumi nemaviri mashandiro uye vamwe pamusoro pe12. Chinhu chakanaka kuziva kuti ndedzipi dzinounza uye kufunga kana zvichizouya navo zvichienderana nemidziyo yaunowanzo gadzira. Iwo akanyanya mhando mamodheru atove neakakosha uye anodikanwa mabasa.
Iwo kuwanda kwemabasa avanayo, kuwanda zvishongedzo zvavanozopawo kuti zvive nyore kwavari.
Iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti izvo zvikamu uye zvishandiso zviri nyore kuchenesa kana kuti ivo vanogona kuenda kune yekuwachira ndiro., nguva dzose yekuchengetedza nguva.
Ndeipi robhoti rekicheni rinotengesa zvakanyanya
Kana iwe ukashamisika kuti ndeipi yakanakisa kicheni robhoti, isu hatina kukwanisa kukupindura neyese nekuti kune akati wandei anonongedza nzira. Asi kune vamwe vakazvimisikidza semarobhoti anotengesa zvakanyanya kuAmazon.
Nzvimbo yekutanga inoenda kuCecotec Mambo robhoti Iine makumi matatu mashandiro, 30 litita emagetsi, pamwe nebhuku reresipi uye yekuwachira yakachengeteka. Kana iwe uchida mubatsiri akanaka, ndapota usazeze kuitenga pano.
Ehe saizvozvo kana iwe uchiri kuda kuchengetedza imwe mari shoma asi uine sarudzo huru parutivi rwako, pane iyi modhi yaunogona kuona pano uye iyi imwe inotengeswa pano zvakafanana. Yekutanga ine 900W uye mabasa anodikanwa kwazvo, nepo yechipiri, iine mamenu masere akagadzirirwa uye 8 litita emagetsi.
La brand Moulinex Iyo zvakare ine akati wandei mamodheru emarobhoti ekicheni akazvimisikidza pachawo pakati pevatengesi vepamusoro. Imwe yacho ndeye iyo ine 3,6 litita emagetsi, pamwe nebhuku reresipi uye mashanu otomatiki zvirongwa zvatakawana. pano.
Ndezvipi zvakanakira marobhoti ekicheni
Isu tatoona izvo zvatinofanira kutarisa kana tichizvitenga, pamwe nemamwe emhando dzinotengesa zvakanyanya. Zvakanaka, tichiziva zvese izvi, zvinongoramba zvichitarisa pane zvakanakira.
Ivo vanotiponesa nguva mukicheni, sezvo ivo vachigadziriswa uye vachizoita basa rese pasina chikonzero chekuti isu timirire.
Ose maviri tembiricha uye nguva zvinotariswa iyo inoenderana nemhedzisiro iri nani.
Vane mabhuku eresipi anotibatsira kugadzira ndiro nenzira dzakasiyana.
Kamwe kwapera, hauzove nezvakawanda zvekuchenesa uye kicheni yako ichave inopfuura yakakwana nguva dzose.
Ivo vane simba uye vanowedzera kuve necompact dhizaini saka havatori nzvimbo yakawandisa.
Zvirokwazvo mushure mezvese izvi, iwe unenge wakavapa iyo yekuenda-mberi kuti ibatanidze mune yako zuva nezuva-zuva! Iyo michina yemukicheni ichakubatsira iwe nguva dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Cooking » Kicheni marobhoti, ndeupi wandinofanira kusarudza?